Famoahana rakikira :: Hampahafantatra ny “Gasikara” i Fara Gloum • AoRaha
Famoahana rakikira Hampahafantatra ny “Gasikara” i Fara Gloum
Angolam-peo haingon’ ny rotsin-gitara no tsaroana raha vao mahare ny anaran’ i Fara Gloum. Rehefa ela niketrahana dia masaka ihany ny nahandro ary tonga ny fotoana hanoloran’ity mpanakanto ity an’ireo sanganasany vaovao, izay voarakitra ao anatin’ny rakikira “Gasikara”. Hira valo no mandrafitra ny kapila mangirana andrenesana karazana gadona maro,
miainga amin’ny “folk” ka hatramin’ny “ba gasy” sady mandalo amin’ireo hira madinika.
Ankoatra ny hira noforonin’i Fara Gloum manokana, toko telo nahamasaka ity vokatra vaovao ity koa ny aingam-panahin’ireo mpanakanto kalaza vitsivitsy. Tsongaina amin’izany ny sanganasa nosoratan’Ingahibe Tselonina, ary nisy koa ireo natolotry ny mpanakanto hafa, araka ny nambaran’ ity andriambavilanitra mpanakanto ity. Mampi- akava ny rakikira koa ny mozika ao anatiny izay mifototra amin’ny gitara avokoa, arahin’ny feon-javamaneno mikorintsana sy feon-gitara beso.
Araka ny fandaharam-potoanan’i Fara Gloum, hoentina an-tsehatra etsy amin’ny trano fisakafoanana TelozoroAndrefan’Ambohijanahary ny “Gasikara”, amin’ny 28 jona ho avy izao. Ho avy hanotrona azy ireo namany kalazalahy amin’ny fitendrena gitara toa an-dry Mbola Talenta, Fanilo Poppin’s, Litsa Kely ary i Johny Bass. Tsiahivina fa iray tamin’ireo telo vavy nandrafitra ny tarika Randrantelo i Fara Gloum. Tsy vitsy koa ireo mpanakanto efa nampiara-peo taminy.
Mozika Rock :: Hanafana ny takariva etsy Ampefiloha ny tarika Kiaka
Fetin’ny mozika :: Hasongadina etsy Andavamamba ireo gadona manerana ny Nosy